dalka A wanaagsan | eactivo | Isbaanish soo guurey
Guuleysatey fasax dheer ka hanti Spanish oo la been abuurtay rajo weyn ku ladhan qoray naga arday Etsuko Nakajima ee dalka, Japan. Halkan waa hordhaca ah ee uu sheekada Etsuko sequida. Waa wax fiican, Xuquuqda?
Etsuko: “Ago 70 sano ku dhamaatay dagaal, laakiin waxaa macquul ah dagaalka kale ma joojin exixtir, sidaasi darteed waxaan rajeynayaa ma jiraan wax dagaal more. Waxa kale oo kor u kacay tirada qoysaska halka waalid iyo tirada qoysaska daryeelka iyo sidaa darteed waxaan dareemayaa inaan sida ay leeyihiin wadan ay caruurta oo dhan ku noolaan kartaa adiga oo aan walwal”.
Waxaan jeclaan lahaa in dadka dunida jooga waxaa ka buuxa jacaylka
Waxaan doonayaa in aan ku noolaado oo aan wax cabsi
Waxaan rajeynayaa ma jiraan wax dagaal more
Waxaan dareemayaa sidii aan u leeyihiin dhul aad u wanaagsan
Waxaan rajeyneynaa in aanu ku nool nahay mustaqbal wanaagsan!
Waxaan jeclaan lahaa carruurta ku koraan caafimaad iyo xoog!
Waxaan dareemayaa sida in dhamaan carruurtu leeyihiin waalidiinta
Waxaan rajeynayaa in caruurta ku nool yihiin dalkii aan wasakhda
Waxaan doonayaa in aan carruurta si ay u helaan waxbarashada
Waxaan doonayaa in aan ku noolaado mustaqbal wanaagsan!
Tani shaqada by Etsuko Nakajima iyo Español Activo waxaa ruqsad ka heeysan ah Creative Commons-Isha Warkan:-NoDerivs 3.0 License Unported.
Published in: Jimicsiga B1, Jimicsi heerka sare
Tags: B1 , gabay , fal , Shaqada Ardayga
2 Comments “Waddan ka wanaagsan”
November 12, 2015 si ay u 12:26
Waxa ay u muuqataa dareen wanaagsan oo si fiican aad u universal.
November 12, 2015 si ay u 21:43
Rajadii Aad u fiican! Dhibaatada waxa ay tahay in ay jiraan dad sidan u badan adduunka waayo, kii xoog, iyo maal ayaa ka qiima badan yahay xorriyadda, caafimaadka iyo farxad. laakiin, Podem baryayaaye in isbedel adduunka mustaqbalka inay ku raaxaystaan ​​hantida ugu muhiimsan in lagu xusay in sheekada. Waad ku mahadsan tahay la wadaago nala habérselo.